Khulisa isivinini sokuphequlula i-Chrome ku-Android | Izindaba zamagajethi
Ungasithuthukisa kanjani isivinini seGoogle Chrome ku-Android
Uqaphele ukuthi isiphequluli sakho se-Google Chrome siziphatha kancane ku-Android? Yebo, uma kukhona induduzo, kufanele sikusho lokho Lokhu anomaly akuyona into ethile ethize kumadivayisi eselula ngohlelo olunjalo lokusebenza kepha futhi, lwamakhompiyutha womuntu siqu lapho kusetshenziswe khona isiphequluli se-Intanethi.
Uma sisebenza kwi-Windows PC, inkinga ingaba ncane ngoba kuleyo ndlela yokusebenza sizoba nethuba lokukhetha noma isiphi esinye isiphequluli se-Intanethi esizosebenza naso; ngeshwa icala elifanayo alikwazi ukuphakanyiswa kumadivayisi eselula anohlelo lokusebenza lwe-Android ngenxa ye- besaba ukuthi abantu abaningi banakho maqondana nokuqina kwezinye iziphequluli. Ngalesi sizathu, uma ufake i-Google Chrome kudivayisi yakho yeselula ye-Android futhi inokuziphatha okuhamba kancane, lapho-ke sizokhuluma ngezizathu zokuthi kungani lokhu kuphawuleka kungakhiwa futhi kube nekhambi okufanele ulisebenzise ukulungisa le nkinga.
1 Kungani iGoogle Chrome isebenza ngokunensa kakhulu ku-Android?
2 Yini okufanele siyenze ukulungisa le nkinga ye-Google Chrome ku-Android?
Kungani iGoogle Chrome isebenza ngokunensa kakhulu ku-Android?
Impendulo esebenza kahle yile esiyokwazi ukuyiphetha uma sesiphethe ngobuqili esizobalula ngezansi; ngendlela ejwayelekile, singakusho lokho amadivayisi amaningi eselula ane-Android operating system ane-RAM encane kakhulu, Lokhu kuyimbangela enkulu yesiphequluli se-Intanethi ukuthi siziphathe kancane.
I-Google Chrome ivame ukusebenzisa izinsiza eziningi kakhulu zohlelo lokusebenza, yize i-RAM iyona ethinteka kakhulu kuwo womabili amadivayisi weselula nakumakhompyutha wakho uqobo. Uma ucabanga lokho eyokugcina ingaba nememori ye-RAM eyeqa i-8 GB Uma nje ukwakhiwa kwabo kuyisekela, isimo esifanayo asinakutholakala kumadivayisi eselula, ngoba lapho ezinye izikhungo eziphezulu zingaba no-3 GB.
Yini okufanele siyenze ukulungisa le nkinga ye-Google Chrome ku-Android?
Hhayi-ke sizobe sisho iqhinga elincane ebesikusikisela ekuqaleni, elizosisiza lungisa inkinga (ukusho njalo) ukuthi iGoogle Chrome kungenzeka yethula maqondana nokuphequlula i-Intanethi; Kuyaphawuleka ukuthi le nkohliso nayo ingamukelwa enguqulweni yamakhompyutha wakho, yize okwamanje sinesifiso sokuxazulula noma iyiphi inkinga yejubane kumadivayisi eselula e-Android.
Uma ungakayilandi i-Google Chrome ye-Android, siphakamisa lokho kwenze kusuka kusixhumanisi se-Google Play Isitolo; Uma usukwenzile, uhlelo lokusebenza luzofaka ngokuzenzakalela ku-terminal.
Uma uyiqhuba, kuzodingeka unikeze izimvume ezithile zokufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Gmail, noma ungasigwema lesi simo uma ungafuni ukwenza kanjalo okwamanje. Kubha yekheli kufanele ubhale okulandelayo:
Ukuphendula, kuzovela iwindi lokuxwayisa lapho iGoogle Chrome iphakamisa khona ukuthi uqaphele nganoma yiluphi uhlobo lwepharamitha othola ukuliguqula kulokhu kulungiswa. Ngaphandle kokwesaba, sincoma ukuthi uye engxenyeni ephakathi nefasitela ozozithola kulo okwamanje, bese uzama ukuthola inketho elandelayo.
Ukuthwebula esikubeke engxenyeni engenhla yindawo lapho kufanele uye khona; ipharamitha yayo isethwe kunketho "yokuzenzakalelayo", into esizoyiguqula okwamanje ngokuyithinta. Ngokushesha izinketho ezimbalwa zizokhonjiswa futhi kuphi, ukusetshenziswa kwenani le-RAM okufanele sikukhethe ngalesi sikhathi. Uma ngabe idivayisi yakho yeselula iphansi nge-RAM, kungaba umqondo omuhle ukuzama ukusebenzisa cishe i-512 MB.
Uma ulungiselela le pharamitha kunani elinjalo le-RAM, uzobe ukhawulela ukusetshenziswa kwayo ngakho-ke, uzovikela i-Google Chrome ekuqedeni imemori engaphezulu kunesidingo. Uma ubheka isithombe-skrini esisibeka phezulu uzobona ukuthi le parameter ingaphathwa ngendlela efanayo kwamanye amapulatifomu, okubandakanya iWindows, Linux noma iMac.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungasithuthukisa kanjani isivinini seGoogle Chrome ku-Android
Ungawakha Kanjani Umlayezo Ojwayelekile ku-Gmail